ढुवानी सवारीमा समान व्यवहार आवश्यक | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय ढुवानी सवारीमा समान व्यवहार आवश्यक
नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय ट्रक तथा टयाङ्करसरहको व्यवहार भारत प्रवेश गर्ने त्यस्तै नेपाली सवारीसाधनलाई नभएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । विदेशबाट मालवस्तु ढुवानी गरी ल्याएका विदेशी ट्रक वा कण्टेनर बोकी ल्याएका ट्रेलरहरू ७२ घण्टासम्म विनाशुल्क नेपालमा रहन पाउँछन् । यो ७२ घण्टाको बीचमा नेपालका प्राय: सबै व्यापारिक केन्द्रमा पुगेर फर्कन भ्याइन्छ । तर, भारतमा प्रवेश गर्ने सोही प्रकृतिका नेपाली सवारीसाधनले भने त्यहाँ प्रवेश गर्नुअघि नै भारतीय दूतावासमा शुल्क बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि भारतका प्रान्तैपिच्छे थप कर तिर्नुपर्छ । वास्तवमा यो असमानता हो र यसलाई तत्काल सच्याई समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो कुनै क्षेत्रविशेष वा व्यवसायविशेषको मात्र समस्या नभई दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धको विषय भएकाले त्यसका लागि सरकारले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
भारतीय र अन्य देशका सवारीसाधनलाई कानूनी रूपमै ७२ घण्टासम्म यहाँ रहन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । आर्थिक ऐन २०६८ को दफा १२ उपदफा ३ (ङ)मा विदेशबाट मालवस्तु ढुवानी गरी ल्याएका ट्रक र मालवस्तुसहितका कण्टेनर बोकी ल्याएका ट्रेलरलाई सो मालवस्तु गन्तव्यस्थलमा अनलोड गर्न र रित्तो कण्टेनर लिई आएका ट्रेलरलाई भन्सार क्षेत्रभित्र रहेका मालवस्तु लोड गर्नका निमित्त ७२ घण्टासम्म अस्थायी पैठारी महशुल लिइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तै प्रयोजनका लागि भारत प्रवेश गर्ने नेपाली सवारीसाधनले भने प्रतिसवारी दूतावास शुल्क रू. ३ हजार बुझाउनुपर्छ । साथै, रू. ५० हजार बैङ्क ग्यारेण्टीसमेत राख्नुपर्छ । भारत प्रवेश गरेपछि पनि प्रान्तैपिच्छे तिर्नुपर्ने कर प्रतिदिन कम्तीमा १ सय भारतीय रूपैयाँ हुने गरेको छ । यसरी उस्तै प्रकृतिको कामका लागि भारतीय र नेपाली सवारीसाधनबीचको विभेद अनुचित छ ।
यस विषयमा विभेद रहेको कुरा सरकारी अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् । तर पनि यो विभेद हटाउन बलियो कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । वास्तवमा यो नेपाल सरकारको कूटनीतिक लाचारी हो । यस विषयमा कुरा उठाउँदा ‘भारतले हाम्रा सवारीसाधन पनि पठाउँदैनौं, तिम्रा पनि नपठाऊ भन्यो भने के गर्ने’ भन्ने विषयमै सरकारी अधिकारीहरू अल्मलिइरहेका वा डराइरहेका छन् । तर, यी सानातिना कुरामा भारतले त्यत्रो अड्को थाप्लाजस्तो लाग्दैन । किनभने भारतजस्तो ठूलो देशका लागि नेपाली ट्रक तथा टयाङ्करहरू (विशेषगरी तेल टयाङ्कर)ले तिर्ने राजस्व निकै सानो हो । त्यसैले उसले त्यो राजस्वकै लोभमा यस्तो व्यवस्था गरिरहेको होइन, यसमा अन्य कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले भारतका ती चासोलाई सम्बोधन गरिदिने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । नेपाली अधिकारीहरूले आफ्नो भनाइ स्पष्ट र दह्रोसँग राख्न नसकेका कारण यो समस्या समाधान नभएको हो भन्न सकिन्छ ।
अर्कातर्फ नेपाली व्यवसायीको हितका लागि भारतीय सवारीसाधनलाई यहाँ ७२ घण्टासम्म रहन दिने व्यवस्था गरिएको हो भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । भारतको बाटो हुँदै नेपाल आयात हुने प्राय: सबै मालवस्तुको ढुवानीमा भारतीय सवारीसाधन नै प्रयोग हुने गर्छन् । त्यसैले ती सवारीसाधनमा कर लगायो भने नेपाली आयातकर्ताले बढी भाडा तिनुपर्ला भन्ने अनुमान होला । तर, उनीहरूले तिरिरहेको ढुवानीभाडाको तुलनामा सरकारले लिन सक्ने शुल्क निकै कम हुने हुनाले त्यस्तो समस्या पनि आउँदैन । त्यसैले भारतीय सवारीसाधनलाई पनि निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि भारतीय पक्षले त्यसो गर्न मानेन भने नेपाली सवारीसाधनलाई पनि समान व्यवहार गर्न लगाउन सकिन्छ ।
नेपालका वाणिज्यमन्त्री तथा सचिवले यहाँ असमानता भएको र यसलाई सच्याउनका लागि पहल थाल्ने बताइसकेका छन् । यसबाट केही आशा गर्ने ठाउँ छ । अर्कातर्फ नेपाली सवारीसाधनलाई भारतमा सुरक्षाको समस्या समेत रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस विषयमा पनि नेपालले भारतका अधिकारीहरूसँग गम्भीरताका साथ कुरा राख्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालको वाणिज्य कूटनीतिलाई हेर्दा यो समस्या चाँडै समाधान हुने आशा भने छैन ।